Ngaphandle ngalo Kunzima ukucabanga insizwa yimpumelelo? Ngaphandle amagajethi kanye, yebo, amawashi. Lolu hlobo lwe-accessory ye-ingenye imfashini kakhulu likufuna emhlabeni. Kungaba ungabonisi kuphela indlela yokuphila indoda noma owesifazane, kodwa futhi kube inkomba yokuthi umcebo, ukunethezeka lento. Akuwona wonke umuntu okhetha izinto ezibizayo ngegolide ngombala namatshe ayigugu. Othile ukunambitha uwela onobuhle ngaphezulu esisebenzayo, ezifana QQ brand. Buka le brand bayindlala emhlabeni wonke. Kodwa onjani brand, futhi yini isici imikhiqizo wale nkampani?
Umlando walo, lokhu inkampani eliyingqayizivele waqala emuva ngo-1976. Sha ngokwayo is owned by ebambe Citizen Group namuhla, kodwa ekuqaleni bakhula ngokuzimela futhi amelwe inkampani enkulu Japanese Japan Citizen Business Machine Corporation. Bhizinisi elaliphambili bayatfutfuka abanyathelisi, izibali, imali amarejista kanye amadivaysi ezokwelapha. Igama brand lisuselwa izinga ibinzana kanye nobungako, okuyinto zihunyushelwe izindlela Russian "izinga nobungako bezithelo". Futhi brand QQ entsha. Amawashi yalesi brand ahlukile kusukela iphuzu lobuchwepheshe umbono, kanye nomklamo, isitayela, lisetshenziswe ukukhiqizwa materials izimpahla.
Ngakho, uchungechunge entsha amawashi, izindleko okwakukhona eliphansi kakhulu ngo-1976 ku-esitolo emashalofini. Nakuba intengo kwezinye tinkhulumo musa azisizi izinkulungwane zamaRandi, banayo eliphezulu Miyota indlela.
Njengoba wazi, phakathi abakhiqizi, intengo elalingelamaFilisti ingxenye ephansi intengo, bekungenxa yemincintiswane njalo, kodwa ngenxa izinga okusezingeni imikhiqizo yayo kule zithengwa ubuthaphuthaphu waphuma ncamashi QQ inkampani, okuyinto ubuka ngaleso sikhathi kuzonyamalala emashalofini.
Uyini ezahlukene imikhiqizo wale nkampani? Minyaka yonke bocwepheshe inkampani nabaqambi ukudedela entsha QQ izesekeli iqoqo. Amahora ezahlukene intengo uhla, isitayela izixazululo nobuchwepheshe ungathola izingane, abesifazane namadoda. Ububanzi izesekeli izigaba eziningana:
I engavamile wale nkampani ukuthi inikeza abathengi imikhiqizo design yanamuhla, high kanye amanani aphansi. Le brand sidalwe kulabo ungafuni ukuchitha imali fabulous kuphela igama, uye ngisho ukuthenga izesekeli okunengqondo kanye nama-practical.
Imodeli wasekuqaleni njalo iyinto enkulu
Kodwa uma inkampani bukhicite izinto evamile, akuhlukile imikhiqizo izimbangi ', okuthile ngakho wayengazi ukuthi abathengi. Lapha isimo kuhluke ngokuphelele, empeleni ethandwa kakhulu eziphansi izesekeli - a Japanese QQ iwashi. onobuhle Electronic kakhulu ziphoqa phakathi abathengi. Zonke sibonga yokuthi bayakuvumela ukuba usebenzise izici ekhethekile, njengemishado ukulawula umsakazo, chronograph, ikhalenda kwenyanga, amandla elanga nezinye. manje imikhiqizo Ukuthengwa le brand kungaba emazweni angaphezu kuka-150. Ukuthandwa ethile wathola inkampani phakathi amakhasimende e-Asia, yiMelika kanye ne-Europe. Kodwa umthengi Russian ayizange indiva uhlangothi ngokuqinile. Kungenxa yalesi sigaba lahlukene amahora yalungiswa amakhasimende nge interface ngesiRashiya.
isitayela yesimanje kanye izinga okusezingeni eliphezulu - isihluthulelo sempumelelo yenkampani
Phakathi nayo yonke imikhiqizo yenkampani ungabahlukanisa iwashi amanzi. QQ 10 Bar - kungcono izesekeli, uyakwazi ezisebenza ngisho ngaphansi kwamanzi. Iqiniso uma umlayezo ingcindezi idlula value eshiwo, le eminye ukusebenza kanye nokunemba nemini kuyodingeka ukukhohlwa. Ngesikhathi esifanayo zingabantu ayinzima futhi ifomu nenhle libukeka esihlakaleni zesifazane, lesandla somuntu. Kuyinto ukhululekile futhi ezingokoqobo ngu QQ iwashi. Yokusetshenziswa kungadingeki, kusukela izesekeli kulula ukusebenza. Kukhona isilayidi ulungisa isikhathi, ifomu zasendulo isongo futhi ukuyona. Njengoba base ezisetshenziswa eliphezulu plastic. Ngenxa isakhiwo eziyingqayizivele umkhiqizo akusho ukukuthinta ebusweni isikhumba futhi akusho baxabane nomzimba.
Le nkampani engakathenjiswa umshado emisebenzini olubanzi nokumaketha. Imikhiqizo ngakho zikufakazela ngokwabo ngesandla amahle - futhi zamanani aphansi, futhi izinga. Kodwa ukuthi amakhasimende bathini mayelana QQ iwashi? Izibuyekezo mayelana izesekeli brand ye omuhle ingxenye kakhulu. Abathengi uqaphela ukuphila isikhathi eside ukumelana esibi amathonya (uthuthumele, uwela). imodeli Manzi buyafaneleka ngokugcwele, ngoba ayikwazi ukudonsa umswakama, futhi asebenza kahle ngaphansi kwamanzi ukuze amamitha angu-100 ukujula! Abathengi itjheje high izimpahla ezisetshenziselwa yokuqedela of isongo. Lokhu kungenxa kakhulu plastic, kuhlangene abicah, kodwa sibonga engasindi futhi iqine isakhiwo ibhande layo alidabukanga noma zidonswe ngisho endaweni uziphu.
-accessory Akubizi izothatha impilo ende
Musa njalo umgomo ukuthenga into okukhethekile, phela, izesekeli engabizi kungenziwa eziqhutshwa futhi 5, futhi iminyaka engu-10. Ukuze wenze lokhu, kudingeka nje unake sha Japanese esiyingqayizivele. Amawashi bekulokhu isesekeli, hhayi indandatho yomshado, okuyinto okwadingeka zisuswe futhi engaboshiwe nsuku zonke. Brand ivumela amakhasimende ukushintsha iphethini kwabo kwansuku zonke, ngiphakamisa ezihlukahlukene imibala, izitayela nomumo isithombe ngasinye. Ukuthenga iwashi wale nkampani, ungaqiniseka: nabo uyobheka stylish, ngisho ngentengo ephansi, futhi bayohlala isikhathi eside, futhi ngokunembile.
Ukuthenga eMilan: izici, iseluleko nemibono ezithakazelisayo
Yini CAPS for round ubuso kufanelekile. CAPS models round ubuso
Youth izingubo: A ezihlukahlukene imifanekiso kanye nemibala
Nikolai Krutoy: biography, umndeni kanye nomsebenzi
Lapho udlala Hulk ngemva "Zenith"?
Umlando Anna Dostoevsky sika, amaqiniso ezithakazelisayo futhi impumelelo yomuntu siqu
Tattoo "isicabucabu": ezihlukahlukene kanye value
Avuvukele lymph node
Izincwadi kwekhulu le-19 e-Russia, abameleli izinkomba etemibhalo